Akụkọ - Ngwa Marathon Akara na Ngwa
N'ihe banyere ọrụ ebere na ihe omume, marathons bụ otu n'ime nhọrọ kachasị akara ebe ahụ. Marathon na-enye ndị na-agba ọsọ ohere igosipụta ume ha, ikike na ntinye onwe ha nye ọrụ ebere ha ma ọ bụ onye na-akwado nhọrọ na ngwaahịa marathon. Onweghị ihe dịka ụbọchị mmega ahụ iji gbaa ndị mmadụ ume ka ha nye onyinye na ọtụtụ mmadụ ka itinye aka; ma ọ bụ maka ebube, na-ekere òkè ma ọ bụ ọbụna ohere iji merie mgbe ọnwa ma ọ bụ afọ nke ọzụzụ.
Na marathons na-ejide mmetụta siri ike maka ọtụtụ ndị mmadụ, yana ọtụtụ narị puku ndị ọgba ọsọ na-abanye n'ime ihe omume kwa afọ, ọ dịbeghị oge ka mma iji bulie ihe ị na-ahụ anya na ọkwa ọzọ. Maka ndị na-ahazi marathon, ịpụ n'ìgwè na-esiwanye ike; mana enwere ike ime ọtụtụ ihe iji mee ka akara gị mara ngwa ngwa maka mmemme ndị ọzọ. Otu ụzọ magburu onwe ya isi bido bụ site na itinye ego n'uwe a haziri ahazi maka oge marathon nke oge okpomọkụ, site na t-shirts ndị a na-eme iji chepụta nhọrọ hoodie gị.
Anyị na-asọpụrụ na-akwado Imbube Marathon nzukọ, na-enye a usoro nke omume omume na-agba ọsọ t uwe elu, hoodies, polo uwe elu, refirii edo, nrite, marathon towel, sọks, okpu, trofi, silicone wristband, ọkọlọtọ, ụyọkọ flags, nsu Kechie wdg.
Banyere Marabu Imbube: Onye di elu, Eze Mswati nke Atọ nwere ọhụụ nke klas ụwa, ihe omume ogologo oge maka Alaeze Eswatini. Ego Eswatini National Province Fund, na njikọ ihe omume ndị na-akwado Standard Bank Eswatini nwere obi ụtọ inwe ike ịnabata ihe omume a dị oke egwu na Sọnde mbụ ọ bụla na Ọktọba (6th Ọktoba 2019).
Are na-atụle itinye ego na t-shirts ma ọ bụ ngwa ọdịnala maka Marathon na-abịa abịa? Mgbe ahụ Wulite Uwe nke Onwe Gị bụ ọrụ maka gị. Mepụta akwa uwe na ngwa ndị ọzọ zuru oke na akara ngosi ihe omume gị. Ọ dịghị mkpa maka usoro dị mgbagwoju anya, ogologo ntụgharị ma ọ bụ usoro mgbagwoju anya. Iji rịọ nkwupụta maka ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị ugbu a.